"Education for Myanmar Youths": ဥာဏ်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 8:08 PM
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲ..။ ဗမာစာကို ဗမာတယောက်လို ကောင်းကောင်းရေးနိုင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်းအချို့မှာလည်း မြန်မာဘာသာနဲ့ နိဒါန်းပျိုး ဆွေးနွေးတတ်ပါသေးတယ်။
စာရေးသူက မြန်မာစာ အရေးအသားကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။
ဆရာရေ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စနစ်ကြီးကတော့ ၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား ပြဿနာကို အလွယ်နည်း (ဒါမှမဟုတ် အလွဲနည်း) နဲ့ ဖြေရှင်းတာလို့ မြင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ လူမှုရေးအမြင်တချို့ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ စတဲ့ လိုင်းတွေက လူကြိုက်များတော့ အဲဒီဝယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအားကို အမှတ်ပေါင်းနဲ့ သတ်မှတ် ဈေးဖြတ်လိုက်တာပဲ။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ မနှင်းဆီပြောသလို လျှောက်ထားတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ ဉာဏ်အမျိုးအစား အစွမ်းအစပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘာသာရပ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့၊ ဘာသာရပ်အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသားမျိုးကို ရွေးထုတ် ခေါ်ယူရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုး လုပ်ဖို့က အမှတ်ပေါင်းနဲ့ ဖြတ်တာထက် စာရင် ခက်တယ်လေ ဆရာရဲ့၊ အဲဒီတော့ အလွယ်လမ်း လိုက်ကြတာပေါ့။ ဒါပါပဲ။
Your burmese writing is better than even you are notaburmese. I like the way you express and the points you show about Burma's education.
I am looking forward to read your writing again.
Thu Ta Maung
ကျွန်မက ပညာရေးစိတ်ပညာကို လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသူပါ။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရတာ အရမ်းကို ဗဟုသုတလည်းရ၊ အတွေးတွေကိုလည်း ရစေပါတယ်.။
ကျွန်မအခု ကျောင်းတက်နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း ကျောင်းသားရဲ့ အရည်အချင်းကို ဘာသာရပ်နဲ့ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ပဲ တက္ကသိုလ်အဆင့်နဲ့ပဲ သတ်မှတ်ကြပါတယ်.။
သူတို့က “ဘာသာရပ်တိုင်းဟာ အရည်အချင်းကောင်းသူလိုတာပဲ၊ ဘာကြောင့် မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥာဏ်ကောင်းသူ (တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ၀ါ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အမှတ်ကောင်းသူ)က သိပ္ပံသွားပြီး မကောင်းတဲ့သူက ၀ိဇ္ဖာသွားရတာလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး”လို့ မကြာခဏ ဝေဖန်ခံရပါတယ်..။
နောက်ဆရာအတတ်သင်ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်တန်းအောင်ရင် မူလတန်းပြ (ကျောင်းလုပ်သား)၀င်လျှောက်လို့ရပြီး ဘွဲ့ရရင် အလယ်တန်းပြ (မူ၊အုပ်)၊ မာစတာရရင် (သို့မဟုတ် ဘီအီးဒီ အောင်ရင်) အထက်တန်းပြဆိုတာမျိုး ရှိပါတယ်။
ဆရာတွေရဲ့လစာကလည်း မူလတန်းပြက လစာအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အလယ်တန်းပြ၊ အထက်တန်းပြ ဖြစ်ဖို့ သင်တန်းတွေတက် ရာထူးယူရတယ်။ ဒီတော့ ဆရာအရည်အချင်းတွေ မပြည့်ခင် မူလတန်းပြဖြစ်နေရပြီး၊ အရည်အချင်းနဲ့ လုပ်သက်ရလာရင် လစာတိုးချင်တာမို့ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပြ လုပ်ရတာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
တကယ်တော့ စိတ်ပညာရှုထောင့်က ကြည့်ရင် မူလတန်းပညာရေးဟာ တကယ့်ကို အရေးကြီးကြောင်း သိစေချင်တာပါပဲ ရှင်..။